Sarin'akanjo ho an'ny vehivavy - inona no dikan'ny hoe, fifamihizana mainty, fifangaroana fotsy, birao, cocktail, kazhual, hariva, teatra, raharaham-barotra
Dress code - karazana akanjo fitafy ho an'ny vehivavy
Ao amin'ny lamaody maoderina, misy toe-javatra izay mitaky fomba sasany amin'ny sary ary ny fisafidianana akanjo manokana. Ireo fepetra ireo dia antsoina hoe fehezam-boninkazo, ny fanitsakitsahana izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny lazany sy ny hevitry ny ankamaroan'ny hafa momba ny fashionista. Ary mba hanamafisana ny fanararaotany amin'ity raharaha ity, ilaina ny hahatakatra ny tena heviny.
Fitsipika - inona no dikan'izany?
Ny hevitra toy izany amin'ny fomba ankehitriny dia midika hoe fepetra sasantsasany amin'ny famoronana sary ho an'ny hetsika manokana. Amin'ny ankapobeny, ny fehezan-dalan'ny vehivavy dia nofaritana amin'ny sehatry ny fandraharahana - fivoriana, fepetra amin'ny asa. Matetika ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ny fandraisana ihany koa dia mitaky ny fikarakarana fitsipika manokana amin'ny safidy ny poketra. Ny fepetra fisehoana dia naparaky ny sampam-panjakana, izay tokony hijanona ho voatokana sy hentitra, nefa koa ho afaka hijoro amin'ny hafa. Ny fahasamihafana lehibe amin'ny akanjo dia matetika ny fanangonana:
Loko tsotra . Ny vahaolana tonga lafatra amin'ny toe-javatra misy fitsipika manokana ao amin'ny sary dia loko henjana - mainty, fotsy ary mainty.
Tombatombok'ireo loko marevaka . Ny tsipìkanao dia tsy hanapotika ny toe-javatra mihetsi-jaza raha misy maramary toy ny tavy manga, manga-maitso, mavo, marsala. Na dia izany aza, ilaina ny mipetraka amin'ny loko iray, tsy ampiasaina ny lokony.
Nude . Tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, ny lamaody maimaim-poana dia mamela palety tsy misy fefy eo amin'ny famolavolana akanjo misy lakolosy. Eto ny tena manan-danja indrindra dia ny loko midadasika - ivory, kafe amin'ny ronono, fasika.
Karazana akanjo fitafy
Ny fitsipika momba ny famoronana ilay sary dia voafehin'ny fepetra isan-karazany - ny fitsipika ara-pivavahana, ny asa atao (ohatra, ny fanompoana na ny fianarana), toerana misy sehatra manokana (trano fisakafoanana, trano fisakafoanana). Misy ireo toe-javatra izay tsy voafetra ny fehezan-dalànan'ny vehivavy. Ny karazany toy izany dia antsoina hoe fakan-kevitra, famoronana, semi-formal, rehefa dimy, fitafiana tsy mahazatra. Ireto misy hevitra maromaro azo ekena amin'ny fahamendrehan'ilay vehivavy. Ohatra, tokony hosakanana ny akanjo sy kiraro, saingy mety misy loko marevaka.
Amin'ny dikanteny dia midika hoe "tady mainty" izany. Na izany aza, tsy tokony haka ny anarana ara-bakiteny ianao. Tsy voatery hanana fitaovana malaza izy io. Ny satroka kofehy mainty hoditra ho an'ny vehivavy dia ofisialy, saingy tsy fombafomba loatra. Ny fitsipika toy izany dia miompana amin'ny fampakaram-bady, ny lohahevitry ny lohahevitra, ny fidirana amin'ny hariva amin'ny fotoan'ny loka (ohatra, Oscar). Ny toetra lehibe indrindra amin'ity sary ity dia akanjo hariva na akanjo fitafy ho an'ny andro fiasana. Kiraro matevina sy hatsikana tsara tarehy no ilaina. Azo atao toy ny firavaka lafo, ary firavaka.
Fango akanjo fotsy fotsy
Io karazana io dia heverina ho ny ofisialy sy manetriketrika indrindra. Ny fanarahana ny fitsipika toy izany dia mitaky ny zava-dehibe ny zava-dehibe manokana - baolina iray, fanambadian'ny olo-malaza, ny fandraisana ny filoha. Ny singa tsy maintsy ilaina dia akanjo mendri-piderana ao amin'ny ety na tsy mihoatra ny kitrokely. Ny takelaka fiakanjo hariva ho an'ny vehivavy dia mitaky tanana mihidy. Noho izany, mandritra ny vanim-potoana mafana, dia mendrika ny maka fonon-tanana lava, ary amin'ny mangatsiaka mametraka endrika voafehy miaraka amin'ny tanana. Tokony horaketina ny volo ary ampitomboina amin'ny teny maneho, fa tsy mahasarika. Ny fitaovana toy ny hatsembohana sy ny firavaka lafo dia mety.
Ny haavon'ny hetsika cocktail dia aseho amin'ny hetsika toy ny antoko iray orinasa, hetsika ara-tsosialy amin'ny fanokafana ny fampiratiana, tabilao buffet amin'ny fiafaran'ny fifanekena. Ny sary dia milamina kokoa ary mety ahitana ny akanjo sy ny akanjo fitafy. Rehefa mifidy ny singa voalohany, ny halatra azo atao dia tsy mihoatra noho ny palmie eo ambonin'ny lohalika. Ny hôpitaly dia mety ho sarotra ny 7/8 ary na ny 3/4 aza. Ny akanjo fitafy kirety ho an'ny vehivavy amin'ny ririnina dia manondro ny fisian'ny kapa felana na pilelerina. Misy fahalalahana hisafidy amin'ny haingon-trano - embroidery, paingina, dantelina. Nanjary tsy maintsy nody ny kiraro sy ny kitapo .
Ity karazana ity dia manana hevitra marefo amin'ny fisafidianana akanjo. Ny fepetra sasany dia sarotra ny manosika azy, saingy ny tari-dàlana ankapobeny dia azo lazaina ho zavatra eo amin'ny kilasin'ny fandraharahana sy ny cocktail. Raha manao akanjo marevaka amin'ny fety ianao, dia ny lamaody enti-mody mahazatra ho an'ny vehivavy dia manome endrika tsy misy pentina marefo, fa tsotra kokoa amin'ny fery. Saingy ny endri-pandanjalanjana dia mety ho voafandriky ny ruffles, ruffles, basques, fotsifotsy. Ity karazana akanjo ity dia mety amin'ny sakafo antoandro miaraka amin'ny mpiara-miasa, sakafo antoandro, daty. Ity no vahaolana tonga lafatra izay ilaina mba hijerena ny tenanao amin'ny fomba hentitra loatra na manambany.
Fitsipika fady ho an'ny teatra
Taona maro lasa izay, noheverina ho toerana iray handehanana ilay kianja. Ho an'ny tranga toy izany, tsy ny fomba fanao amin'ny akanjo fotsiny, fa ny lamba koa, ny fanangonana, ny fanandramana ary ny fofona dia nofinidy tsara. Saingy inona no tokony hiketrika amin'ity andro ity, raha ny tsipika ofisialy amin'ny famerenana ny famokarana tantara an-tsehatra dia tsy misy dikany loatra? Zava-dehibe ny mahatakatra izay tsy tokony havoaka. Ary eto ireo mpanakanto dia manavaka faktiora roa lehibe - sariohatra amoron-dranomasina sy fanatanjahan-tena. Ny idealy dia fitsipika akanjo hariva, indrindra raha manomboka ny fandaharana amin'ny hariva. Nefa andeha hijery ireo hevitra vaovao:
Clothes . Ny safidy tsara dia akanjo henjana miaraka amin'ny kiraro tsara tarehy - kisary na hoditra misy hoditra, akoranjy misy vato sy vato. Ny vahaolana hafa dia ho lasa malaza, fa tsy akanjo henjana misy pataloha sy kiraro asymmetrika na orinasa iray.
Footwear . Ny famaranana ilay sary dia azo sokafana ary mihidy. Nefa aoka ho azo antoka ny fampiasana kiraro amin'ny tongotra mihidy, izay ahafahanao mitafy kiraro na kiraro. Ny tongony tsy manan-tsiny dia tokony hofafana.
Ny kitapo . Ny safidy manararaotra indrindra amin'ny fisafidianana kitapo dia klutch. Ity modely ity dia mifanentana tsara amin'ny fehezan-teny misy laconic sy ny famenony. Amin'ny fomba hafa, hanao dikan-tsoratra vita tanana vita tanana ny tanana.
Fanahy . Noho ny fisian'ireo olona maro ao amin'ny teatra dia tokony ho vaovao ny fofona, fa tsy manjavozavo. Arahabao lafarina tsara. Ny vahaolana toy izany dia azo jerena amin'ny marika toy ny an'i Chanel, Dior, Versace ary ny hafa.
Code Dress Code
Ny sehatra raharaham-barotra - ny tranga mahazatra, izay tsy azo ovaina ny fanarahana ny fitsipika mifidy akanjo manokana. Eto dia zava-dehibe ny mitoetra ho antitra sy laconic tsy amin'ny endriky ny tsipiriany, fa koa ny volo, manikika, makiazy. Zava-dehibe ny tsy hampiasana tsiranoka henjana sy sangisangy. Tsy misy loko hafa mifanohitra, afa-tsy ny fampifangaroana tononkalo malaza. Ny Taboo dia apetraka ary amin'ny printy . Ny singa niavaka dia ny fetra ara-jeômetika tsy voafetra - tsangambato anglisy, sodina, "hazo Christmas". Andeha hojerentsika ny fehezan-dalàna momba ny akanjo amin'ny biraon'ny vehivavy:
The skirt . Ny endrik'ilay tena izy dia pensilihazo kely. Ny halavan'ny ampongatapaka dia natolotra teo ambany lohalika. Na izany aza, vao haingana, ny solosaina dia avela dimy santimetatra eo ambonin'ny kneecap.
Blouse . Ny safidy tsy azo ovaina dia fotsy hoditra tsotra. Na izany aza, raha tsy manao akanjo mofomamy na zavatra takiana amin'ny fisehoan'ny orinasa ianao dia tsy saro-bidy, seza na chiffon blouses miaraka amin'ny jiron'ny fanaovan-tselatra, kiraro-kiraro ary hafa karazana dia azo ekena.
Jacket . Ity singa ao amin'ny garderobe ity dia heverina matetika fa ilaina. Ny klasika dia akanjom-bolo tokana miaraka amin'ny fanakatonana bokotra, fihodinam-bokatra ary fikorotanana tery.
Footwear . Ny birao foana dia mandefa kiraro tsy tapaka. Tsy tokony hipoitra amin'ny toe-javatra rehetra ny rantsana. Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, ny kiraro marina dia sambo, derby na oxford, boots ankle. Amin'ny fahavaratra dia azo atao amin'ny kiraro lehibe ny clogs.
Dress Code Office - Dresses
Ny iray amin'ireo akanjo indrindra amin'ny akanjo amin'ny birao ny birao dia akanjo. Ny antsipiriany toy izany dia hanasongadina ny maha-vehivavy, ny fahamendrehana ary ny fanatsarana, izay matetika tsy ampy amin'ny vehivavy tsy miankina. Na izany aza, tsy ny fomba rehetra dia mety amin'ny tsipika ara-barotra. Ny tranga manan-danja indrindra dia tranga misy laconic. Ity modely ity dia manana silhoueta havanana mahitsy. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny alemaina Ny kodiarana ambaratonga ao amin'ny birao dia manome ny lavany avy amin'ny afovoan-tohodrano ka hatramin'ny folo santimetatra eo ambonin'ny lohalika. Ity tranga ity dia hita ao amin'ny tsena maoderina, na amin'ny fafana am-bava mafana, ary amin'ny endriky ny fandroana henjana.
Birao fiantsoana akanjo - akanjo fitafy
Raha mitady vahaolana ianao, ary ny sarinao dia misy rhythm energetic sy mavitrika, dia ny safidy tena izy dia ny fametrahana pataloha. Ny tendrony dia matetika toy ny singa ao amin'ny poketra dia misolo tena amin'ny endriky ny jacket. Ao amin'ny troika lamaody dia misy waistcoat izay azo atao eo ambanin'ny jaky na amin'ny vahaolana mahaleo tena. Ny akanjo fandraharaham-barotra momba ny varotra dia ny pataloha vita amin'ny akora vita amin'ny volon-davenona na volon-doko mivantana. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny halavan'ny 7/8 dia azo ekena. Admissible trim dia fitongilanana matevina amin'ny tavy ary mihalalaka ny zana-tsipìka afovoany.
Aza mieritreritra fa ny tsipìka misy birao dia sangodim-borona mahatsiravina. Ny famitahana toy izany dia hanampy amin'ny famafana ireo fanampiana maoderina. Tsy misy fisalasalana, firavaka amam-bolo sy felam-boninkazo amin'ny fomba toy izany. Na izany aza, ireo kavina kely, ny peratra (tsy mihoatra ny iray) ary ny famantaranandro dia azo ekena. Ny fehezan-dalàna mifehy ny fikambanam-behivavy dia midika fa ny fisian'ny fifatorana. Ny fitaovana toy izany dia tsy vitan'ny manasongadina ny fahasosoran'ny fomba, fa manala ny endriky ny laconic ny garderobe. Zavatra iray manan-danja dia kitapo. Ny portfolio-, modely iray amin'ny endrika geometrika, tablette ary ordinatera hoditra dia heverina ho nentim-paharazana.
Office dress code - manikika
Tokony hosoloina tsara ny valin-dabam-behivavy. Ary zava-dehibe ny mihaino ny saina fa tsy amin'ny famolavolana ny fantsika, fa koa amin'ny hoditra, kutika, ary ny endriky ny takelaka fantsika. Ny akanjo fitafy kazhual dia mamela fanitsakitsahana lava sy manaitra kokoa. Eto dia azonao atao ny manamboatra tsangambato - ombre amin'ny feo tony, feng shui fomba ao anaty palette iray, fandrakofam-bozaka marevaka. Na izany aza, raha voafatotry ny rafitra henjana ianao, dia tokony ho endrika malefaka sy lava fohy ny fantsika anao - tsy mihoatra ny roa milimetatra eo ambonin 'ny kisoa. Ny fisafidianana ny lokony dia palette tsy mitongilana amin'ny vahaolana tokana.
Ny volon'ny vehivavy mpandraharaha iray dia tsy tokony ho sahiran-tsaina na tsy ho variana. Noho izany, ny mpankafy dia manizingizina amin'ny endritsoratra fohy amin'ny endriky ny pixies. Raha tompona vintana lava lava ianao, dia tokony hesorina amin'ny hatsikana madio ny fahamendrehanao. Ny sata mifehy ny akanjo fitafy ho an'ny vehivavy dia volo voangona ao anaty penina. Amin'ity tranga ity, tokony ho mendri-pirahalahiana tanteraka io lay io, fa ny fitongilan-tena kosa dia mety hanana endrika tsara. Ny fitaovana dia "akorandriaka" na rambony mihitsy aza, vy mihintsana. Ny trano fanorenana dia tsy manome loko mamirapiratra sy ny fisian'ny mpihazona fanaka ho an'ny volo.
Photoshoot amin'ny lohataona amin'ny natiora
Chiffon blouses ho an'ny vehivavy ambany
Ahoana no hampifandraisana ny lokony amin'ny akanjo?
Ahoana ny fomba hanaovana feo tsara?
Inona no havoaka any Thailand?
Miondrika - inona no vokatr'izany?
Fiaramanidina grenady keramika
Fambolena trano manokana
Tsiranoka amin'ny tsokan-taolana
Menu an'ny vehivavy bevohoka - 2 trimès
Ny tapakila fanasana amin'ny sakafo hariva miaraka amin'i George Clooney dia mandoa 350 000 dolara
Kitapo sponjy ao amin'ny mikrô
Ahoana no nahafatesan'i Paul Walker?
Famantarana - ilay kankana dia naniry
Harona ho an'ny kilalao amin'ny tananao
Mialà eo amin'ny Ranomasina Mainty "miaraka amin'ny rehetra"